Sea Port Ukukhanyisa LED, Ukuthumela Port Lights, Isikhumulo semikhumbi Khanyisa | TACHYON
Posted on October 15, 2017 October 19, 2017 Amandla High LED-Flood Khanyisa Abakhiqizi
Sea Port Ukukhanyisa LED, Ukuthumela Port Lights, Isikhumulo semikhumbi Khanyisa | TACHYON LED Flood Lights
Sea LED Port Ukukhanyisa ingenye nemisebenzi eyinselele kakhulu port ukukhanyisa umkhakha. Le ndawo futhi ngaleyo ndlela imfuneko amandla Sea Port Lights kungaba efunwa kakhulu, neqiniso lokuthi nokuvimbela ukugqwala ngenxa emakamu eliphezulu ulwandle okunosawoti inkungu. Ngaphandle, abasebenzi crane kanye nabashayeli uncika ngokuphelele izinga okusezingeni eliphezulu LED Sea Port Lighting & Ukuthumela Lights ukuthi babe okusezingeni eliphezulu ukukhanyisa ukufana.
Sibutsetelo Sea Port Ukukhanyisa LED & Harbour Lights
Ngo itheku kanye esitsheni umkhumbi izindawo, sisebenzisa isigxobo esikhulu kokuba multiple High Power LED Sea Port Lights ukunikeza uzamcolo jikelele ukukhanyisa ukukhanya kulo lonke port kolwandle & lokuthumela port. Lezi izibani zidinga semali energy ukusetshenziswa, kodwa LED port ukukhanyisa ukukhetha TACHYON Lights usunciphe ngamaphesenti 80%. Njengoba enkanyiso ezivamile, inkinga wukuthi ezivamile imithombo ulwandle port ukukhanya ezifana High Pressure sodium ne halide metal igqamile lapho entsha, kodwa inesikhala ukuwohloka (nokuncipha lux ezingeni) kungenzeka ukwenzeka ngesikhathi esifushane. Njengoba ezothatha isikhundla ingilazi yesibani akuwona neze umsebenzi olula nge ukukhanya efakwe ezingeni ukuphakama 100 ukuze 150 izinyawo, Ngakho-ke, a nehlala njalo Sea LED Port Ukukhanyisa Isixazululo Kubaluleke kakhulu.
Inkinga yesibili umklamo yendabuko Sea Port Lights - kukhona entabeni elukhuni ulwandle port izibani futhi ivame ukuba nobuso ngqo phansi, okwenza nomthelela omkhulu ukukhanyisa ukufana. Ngokwalokhu esesixoxe ngakho, TACHYON eba Premier eqondile Optical Lens System ukuze ukuklama futhi ushintshe LED Sea Port Ukukhanyisa Isixazululo uma-by-case nesisekelo ukunikeza super elikhanyayo & izibani ukufana ngoba Sea yakho Port.
Ngakho, ne TACHYON amandla okusezingeni eliphezulu LED Sea Port Ukukhanyisa izinhlelo, a entsha ye, kangcono ukukhanyisa izinhlelo ukuthi singasetshenziswa ukuthuthukisa izinga ukukhanya, umthamo wokukhanya & ukusatshalaliswa ukukhanya ngaphakathi port kolwandle. TACHYON LED Sea Port Ukukhanyisa uhlelo ingasetshenziswa isikhathi esingaphezu 80,000 amahora, ngakho akudingeki ukuba esikhundleni ama ukukhanya 10 iminyaka 24/7 ukusebenza. Silwela ukunikeza isixazululo esingcono kakhulu ukuthuthukisa ukubonakala, anti-glare, ukunciphisa londoloza izindleko energy kanye nokugcinwa imvamisa athula endaweni, isiqukathi isitoreji endaweni, noma yimuphi crane ukukhanyisa isicelo esikhethekile ngaphakathi kolwandle port ukukhanyisa izindawo.
Sea Port High Mast Khanyisa & naseHabori Lights
Sea Port Lights e High Mast kulungiselelwa - isetshenziselwa esikhundleni halide metal noma HPS ukukhanya ku ezahlukene 250W ukuze 4000 W. Ukukhanya has a 5 Iminyaka Isiqinisekiso. Lezi izibani kudle isilinganiso samandla esingaphansi futhi iyashelela ukuze likhiqize izinhlobo ezingaphezu kuka- 200,000 lumens. Ngaphezu kwalokho, banayo uhlobo lokugcina lens esibangela cishe 90% lumen utilization. We will help as much as possible when there are storage places, iziqukathi nezindawo isitoreji ezidinga insika okusezingeni eliphezulu ulwandle port ukukhanyisa izinhlelo. Ukwesekwa yethu izikhulu & ubunjiniyela njalo enawulungiselelwa imibuzo yekhasimende futhi unikeze iseluleko esingcono kakhulu ukuze uzithengele LED ulwandle port ukukhanyisa izixazululo kungakhathaliseki ukuthi port ukukhanyisa izinhlelo noma LED isiphanyeko ukukhanyisa izinhlelo. Ngaphandle, njalo ulwela ukunakekela aphakeme olwandle port ukukhanyisa izixazululo ngokuvumelana nezimfuneko yekhasimende, ezifana itheku ukukhanyisa uhlelo, itheku ukukhanyisa uhlelo, isiphanyeko ukukhanyisa uhlelo, kanye nezinye ndawo enkulukazi ukukhanyisa izixazululo. Sine ithimba lochwepheshe esiphatha imibiko DIALux & ukukhanyisa design. Sinikeza imikhiqizo izinga phezulu kuphela.
Izinhlobo LED Sea Port Lighting
Ezinye izinzuzo kwesikhathi eside LED ukukhanyisa izinhlelo kuhlanganisa: I LED ukukhanyisa uhlelo kunciphisa tindleko yesondlo ngo- 60% kuqhathaniswa Kubiza incurred uma usebenzisa metal halide izibani. Futhi, isikhathi sokuphila kuyinto 80,000 amahora okuyinto ukulondoloza kakhulu wena yesondlo izindleko ukukhanyisa ulwandle port. LED isiphanyeko ukukhanyisa: LED isiphanyeko ukukhanyisa liwumthombo emangalisayo ukukhanya zokukhanyisa port echwebeni terminals, ikakhulukazi isicelo ukufakwa ongaphandle. LED isiphanyeko ukukhanyisa Uhlelo lwethu ezithuthukisa ukukhanyisa ka wonke-port yize ke unamathele udonga lwangaphandle, endaweni emphemeni, isigxobo ngasolwandle, noma phezulu crane ukhiye. Isikhumulo semikhumbi ukukhanya - ulwandle port ukukhanya ngaphakathi itheku zibonakale entsha kuya zasesikhumulweni semikhumbi kanye yenethiwekhi. TACHYON inikeza engcono itheku ukukhanyisa & ulwandle port ukukhanyisa ongakhetha ukuthi Uzakukhanyisa kahle kakhulu port endaweni yakho ukhiye. Isikhumulo semikhumbi futhi nokukhanya ezibalulekile ezivela iphuzu nokuvikeleka umbono; kungenxa yokuthi ukukhanya okwanele ingasiza CCTV okuqoshiwe & futhi ake abantu bazizwe bephephile. Ngokusebenzisa LED ulwandle port ukukhanyisa nohlelo ngokushesha amyisa ethekwini laseKhesariya esibulalayo, singakwazi ukuqinisekisa ekuphuculeni kwegezi nokuphepha.
Material of LED Sea Port Lighting, Isikhumulo semikhumbi Khanyisa & Ukuthumela FloodLights
Sea Port Ukukhanya singangena ukugqwala ngenxa kwenkungu okunosawoti kolwandle. Indlela TACHYON ziphathelene lolu daba? itheku ukukhanya kwethu zalapho & ulwandle port ukukhanyisa lidlule emanzini usawoti nomoya test nokhahlo. Lezi izibani zenziwa high aluminium ingxubevange udonga lwangaphandle & polycarbonate ikhava yelensi, futhi yakhiwe kahle kakhulu futhi enamandla, ezaziyincithakalo lisetshenziswa iminyaka eminingi port kanye esitsheni sakho luhlobo. Sinikeza 5 Iminyaka yesiqinisekiso kanye.
Uma ukhathazekile mayelana nendlela ukushintsha bendabuko port ukukhanyisa uhlelo, sizosiza wena nge high LED ulwandle port ukukhanyisa kuhlanganise ukukhanyisa design kanye ilungiselelo ukufakwa. Ukusungulwa kwe-entsha LED ukukhanyisa uhlelo senziwe yokuqinisa ukukhanyisa port. Entsha LED ulwandle port ukukhanyisa unekhono liqhubeke 80,000 amahora noma ngaphezulu.
Umkhiqizo Uphenyo on Sea Port Ukukhanyisa LED